Izimbuzi zidinga ukuphathwa ngemisebenzi efana nokugoma, ukugcoba, ukugoqa nokuhlunga. Iqoqo lezinhlaka zokusebenza lizonciphisa ukucindezeleka kanye nengozi kokubili izilwane nomlimi. Izibaya ezincane nezindawo zokuphatha zivumela ukuphathwa kalula kwezimbuzi kunokuzama ukusebenza nazo ekamu elikhulu.
Izimbuzi zihlakaniphile futhi zingaba nzima ukuphatha nazo kunezinkomo noma izimvu lapho usebenzisa imishini yokuphatha. Awukwazi 'ukugeleza' kalula futhi zithambekele ekucindezelekeni kalula. Uma zesaba, zingase zizqoqe ndawonye ekhoneni noma zilale phansi futhi zisuke, kepha zingase zibe nobudlova komunye nomunye.
Into eyinhloko okufanele uyicabangele lapho ubamba izimbuzi ukuzigcina zolile futhi zivikele ukulimala. Sebenza ngokuthula ngezimbuzi zakho, ungalokothi uziphoqe noma uzihlole okungadingeki. Akukho ukuwisa, ukuphonsa, ukuhudula izimbuzi noma ukudonsa ngoboya, umsila, izindlebe, imilenze, ikhanda noma intamo okuvunyelwe.
Lapho uphatha izimbuzi, udinga ukuqonda ukuziphatha kwazo kwemvelo. Isibonelo, zikhetha ukuhamba ekukhanyeni kunokuba zibe ebumnyameni. Azithandi izakhiwo ezimnyama futhi ziphazamiseka kalula ngomsindo. Izimbuzi zithanda ukulandela umholi futhi uma zihlala epeni, zivame ukuhamba embuthaneni ozungeza umphathi.
Izimbuzi nazo zikhetha ukuhlala emhlambini futhi zizohamba emaqenjini omndeni, abesifazane abadala behamba kuqala. Ukuhlukanisa kuzobangela ukucindezeleka.Zingaba nobudlova lapho zivalelwe futhi zicindezelekile. Lokhu kungabangela ukuba zigxume futhi zithole izikhala ukuze zibalekele. Qaphela lapho uphatha izimbuzi zenduna, njengoba induna ecindezelekile ingabangela ukulimala kuwe nezilwane zakho.
Imfuyo ayithandi ukuqhutshwa ebumnyameni futhi isabela kalula uma umuntu emi ngemuva kwehlombe, kodwa namanje emkhakheni wabo wombono. Ukuze uthole izimbuzi ukuhamba phansi isiteshi esincane, hamba ngokushesha, eduze komjaho ohambelana nezimbuzi; Lokhu kuzokwenza ziqhubekele phambili endaweni.
Indlela Yokubamba Imbuzi
Ukubamba imbuzi, uhambe ngokuthula ohlangothi lwayo bese uyibamba ngesisekelo sezimpondo noma phezulu emlenzeni, hhayi 'eqakalenii'. Thatha izinyane lembuzi ngengalo eyodwa phambi kwemilenze yangaphambili kanye nengalo engemva kwemilenze yangemuva. Izimbuzi akufanele zihanjiswe yimilenze yazo, imisila yawo akufanele iphakanyiswe noma ishintshwe futhi akufanele ihanjiswe ngokugcina kuphela izimpondo, indlebe noma umsila.
Uma udinga ukuphatha imbuzi, ibambe phansi izimpondo hhayi amathiphu. Imbuzi kufanele ibanjwe ngesandla esisodwa noma ingalo entanyeni nenye ingemuva. Uma imbuzi 'iphendukile' ukuze ihlolwe isisu sayo, ukugoqa izinselo noma ukukhipha izingubo kuphakamisa imilenze yangakwesokunxele kuqala. Amathumbu azoguqula ngendlela yokulwa newashi futhi azokwehlisa izimo ezingavamile nesisu esiphuthayo. (Ukubuka umsila wembuzi, kufanele ujikeleze ngendlela ehamba ngayo.)
Uma imbuzi ibuyiselwa ezinyaweni zayo kusukela 'ukuhlala' isikhundla kufanele igoqwe ukuze izinyawo zayo ezisele zithinte kuqala emhlabathini.
Ungalokothi uhudule isilwane ngemilenze yayo, sebenzisa I-prodder noma uyishaye ebusweni.
Ukuphatha Izimbuzi Ensimini
Emasimini amakhulu, izinja (ukusebenza kabanzi kusuka emfuyweni) ziyasiza kakhulu. Izimbuzi ziyobambelela ndawonye bese ziqala ukuhamba ngokushesha uma zibona inja. Ngokuvame, lokhu kuzosho ukuthi basuka ngokushesha ekukhuphukeni.
Izimbuzi zizohamba njalo ngokukhuphuka ngokushesha. Kunzima ukuhambisa izimbuzi ezinkulu ezansi, ikakhulu uma zikhona izingane.Zivame ukuphuka ngaphesheya kwegquma. Hambisa kancane kancane phansi.
Izinduku zingasetshenziswa uma ushayela izilwane. Esikhundleni sokushaya umhlabathi ngaphezu kwesilwane ngokwawo. Izilwane ezihamba ngezinselo, kufanele ziqhutshwe ngezinga elikhululekile, hhayi ngokushesha kunesilwane esincane kunazo zonke futhi zingekho ngaphezu kwe-20 km (ngosuku lokuqala) futhi zingekho ngaphezu kwe-15 km ngezinsuku ezalandela.
Izimbuzi kufanele zibe nokudla namanzi ngokushesha ngaphambi nangemva kokuhamba. Njengoba izimbuzi ziba nzima kakhulu, ukubuyiswa kwazo ngemuva kokuthuthwa kuzothuthuka. Ngezikhathi ezithile izimbuzi zingadliwa futhi zingadli ngemuva kokuhamba. Izimbuzi ezidinga ukuhamba kakhulu kufanele zibe esimweni esihle.
Izimoto zokuthutha izimbuzi kufanele zibe nephansi engasheleli (kanye nokulala njengokufana nemfucufucu noma utshani), izinhlangothi eziphakeme kune-750 mm, nge-ventilation nokukhanya. Izimoto akufanele zivalwe ngokuphelele. Iloli idinga ukumbozwa ngendwangu yokuvikela izilwane emoyeni nasemvula, kepha kudingeka kube khona umoya owanele. Ungafaki iloli isikhathi eside kunehora ngaphandle kokunikeza umthunzi noma umoya ojikelezayo.
Kubalulekile ukuhlukanisa izimbuzi ngamanani amancane ngamaloli ukuvimbela ukulimala nokushayisana. Izilwane ezihlukene ezinamahloni nezivotshwe, abesilisa nabesifazane kanye nezilwane ezinkulu nezincane ukuvimbela ukulimala.
Izilwane eziyimpumputhe kufanele ziphawulwe ngokucacile ngombuthano onemibala ezizungezile amehlo futhi zonke zombili izimpumputhe zesilwane. Kufanele baxhunywe ngokwehlukana.
Ukuthutha nokucindezeleka kungabonisa izinkinga zempilo ezisekelayo. Izimbuzi zingathuthukisa izimpawu zomtholampilo zezifo zokuphefumula kanye ne-pneumonia noma izibungu ngenxa yokucindezeleka ngesikhathi sokuphatha.
Uma ulayishwa, qiniseka ukuthi usebenzise irampu engekho-slip futhi unikeze amanzi amasha nokudla ngokushesha. Izimbuzi akufanele ziwehliswe noma zifinyelele emotweni ukusuka ekuphakameni okukhulu kune-1.5 m.